Madaxweynaha Puntland oo dowladda ugu baaqay inay Ciidamada kala soo baxdo gobolka Gedo - Awdinle Online
Madaxweynaha Puntland oo dowladda ugu baaqay inay Ciidamada kala soo baxdo gobolka Gedo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka inay Ciidamadeeda kala soo baxdo Gobolka Gedo, si Jubbaland doorasho uga qabato.
Madaxweyne Deni oo hadal ka jeediyay Maanta Shirka Madasha Iskaashiga Soomaaliya & Beesha Caalamka oo uu uga qeyb-galay Aalada Zooomka ayaa sheegay inay muhiim tahay in Madaxda Dowladda tixgeliyaan nidaamka, isla markaana Ciidamada ay geysay Gobolka Gedo ay dib uga soo celisay.
Hadal-jeedinta Saciid Deni oo uu kaga hadlay Arrimo dhowr ah ayaa sidoo kale ku sheegay in Guddiga doorashooyinka Xildhibaannada Gobolada Waqooyi uu nqodo mid loo dhan yahay oo ay ka wada tashadaan dhammaan xubnaha saamileyda ee ka soo jeeda Somaliland.
Sidoo kale Saciid Cabduullaahi Deni ayaa si kulul uga hadlay Arrimaha doorashooyinka iyo Guddiyada uu muranka ka taagan yahay, waxana uu dalabday in doorashooyinka ay noqdaan kuwo hufan oo heshiis lagu wada yahay.
Madaxweynayaasha puntland iyo Jubbaland ayaan weli dowladda Federaalka soomaaliya u soo gudbin Guddiyada doorashooyinka Heer Dowlad goboleed, halka Maamulada, Galmudug, Hir-Shabeelle & Koonfur Galbeed ay u soo gudbiyeen.
Previous articleShirka Soomaaliya & Beesha Caalamka oo Muqdisho ka furmay
Next articleRW Rooble oo safar deg deg ah ku tagaya dowlad Goboleedyada